EA038 - OMG Ikuku Oku Ikuku Oku Ikuku Mberede na Button Wearable maka Home / Nkeonwe (bọtịnụ oku 2 + ndị natara 3) | OMG Ngwọta
Mkpu Mberede Nsogbu Mberede Mberede maka Ndị Agadi na Nkwarụ (Officelọ Ọrụ, Homelọ, Ebe Ọrụ, Worlọ Ọgwụ) Ndị okenye na-ada ada mgbochi, bọtịnụ ụjọ mberede, & Ngwọta Na-agagharị Na-agagharị [Singapore / Jakarta]
Usoro Mgbochi Fall
[A ghaghị inwe ihe】 Maka ndị agadi, ndị nwere nkwarụ, ma ọ bụ ndị na-arịa ọrịa na ibe ha na-elekọta ha. Ọ dịkwa mma maka ndị na-agwọ ọrịa, nzaghachi zuru oke iji mara nke ọma mgbe onye ahịa ahụ kwadebere n'enweghị echere ogologo oge ịbanye n'ime ụlọ ma ọ bụ ghara inye ha oge zuru ezu tupu ị akụ.
[Nwee obi maka ibu】 A na-eyi ihe ntanetị ahụ n'ụzọ dị mfe n'olu ma ọ bụ buru na akpa. Nanị ịpị bọtịnụ na transmitter ga-eme ka onye nata na-ama ụda olu. Enwere 52 họrọ ụda nche iji họrọ.
[Mfe Nwepu】 NNUKWỤKWỌ NDỊ NNA NA-EWUKWU (4-10db) na-abanye ụmụ ọhụrụ na ndị na-ehi ụra. Jiri olu 110 mee ka olu na egwu dị mfe na nkwụnye nkwụnye.
[Technology dị elu】 Na-eme ka nkà na ụzụ na-eme mgbanwe ugboro ugboro, ihe mgbochi ọzọ karịa usoro ikuku mkpuchi nkịtị na 500ft / 150m na oghere, ntinye ike na nkwụsi ike, nwere ike banye n'ime mgbidi.
Ọgbara ọhụrụ & nkecha
Kwesịrị. 500 + ụkwụ arụ ọrụ (oghere imeghe)
4 ọkwa nke olu
Low ike oriri
Voltage ọrụ nke Onye Natara: 110-260V
Batrị na Transmitter: Batrị CR2032
Na-arụ ọrụ: 500ft N'aka oghe.
IHE: Transmitter chọrọ batrị CR2032 nke etinyelarịrị na ọ bụ onye na-enweghị ike ịnwetaghachi. Onye natara na-abanye n'ime mpempe mgbapụta ma chọghị batrị.
Nzuzo 8721 13 Echiche Taa
EA037 - OMG Ikuku Mberede Oku Ikuku Ikuku…
EA039 - OMG Ikuku Mberede Oku Ikuku Ikuku…
OMG Ikuku IP55 Waterproof SOS Call Button na…
EA067 - OMG Emergency SOS Call Butic Button with…
EA046 - OMG Ikuku Calling System na…
Toplọ ọrụ Singapore 500 kacha elu 2018 & 2019